Faallooyinka mobiles-yada, smartwatches, kiniiniyada, qalabka, barnaamijyada, ciyaaraha, ... | Androidsis
Dib-u-eegista ama falanqaynta waxaa loogu talagalay in lagu go'aamiyo haddii sheygu uu ku noolaado filashooyinka oo uu mudan yahay iibsasho Qaybtan waxaan ka heli doonnaa noocyo kala duwan oo dib u eegis wax soo saar ah, oo ka socda taleefannada casriga ah ama kiniinno ay la socdaan Android oo ah nidaamka qalliinka iyo sidoo kale badeecooyin kale oo badan oo ka socda noocyo la xiriira adduunkan sida kamaradaha, sameecadaha, sameecadaha dhagaha, kuwa ku hadla smart ama smartwatches. Dhammaan noocyada wax soo saarka.
Waad ku mahadsantahay dib-u-eegiddan waxaad awoodi doontaa inaad ogaato haddii uu jiro qalab Android ah oo aad xiiseyneyso, waad awoodi doontaa inaad ogaato haddii ay mudan tahay iibsashada. Qeybtaan 'Androidsis' waxaad ka heli doontaa dib u eegista ugu fiican uguna dhameystiran. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qalabkan waxaa laga heli karaa qaybtaan.
Mibro Lite, falanqaynta, qiimaha iyo caddaymaha
by Rafa Rodríguez Ballesteros samee 3 maalmood .
Waxaan ku soo laabanaa Androidsis anagoo dib u eegis ku samaynay saacada smartwatch ee shirkad aan naqaano. Xubin cusub oo ka tirsan...
by Miguel Hernandez samee 1 toddobaad .
Realme waxay sii wadaysaa inay ku cadaadiso suuqa taleefanka khadka dhexe inta u dhexeysa qeybaheeda kala duwan, ...
Ma ammaan baa in laga iibsado Yaphone?
Waad ku mahadsan tahay internetka, waxaan helnaa dukaamo badan oo internetka ah oo noo oggolaanaya inaan isbarbar dhigno qiimaha ...
Xiaodu Du Smart Buds, falanqaynta, waxqabadka iyo qiimaha
by Rafa Rodríguez Ballesteros samee Toddobaadyada 2 .
Oo waxaan sii wadnaa alaabooyinka tijaabada ah ee aan joogsiga lahayn ee kaabaya taleefannada casriga ah. Kuwaas oo aan shaki ku jirin lamaanaha ...
by Rafa Rodríguez Ballesteros samee Toddobaadyada 3 .
Markaan nahay Androidsis waxaan sii wadnaa inaan tijaabino dhammaan noocyada kala duwan ee aaladaha iyo aaladaha casriga ah. Mar labaad waxaan awoodnay inaan isku dayno qaar ka mid ah dhegaha -dhegaha ...
SmartGaGa Miyuu emulator -kan Android yahay mid nabdoon?
Markay tahay ka hadlida emulators -ka Android, waa qasab inaan ka hadalno Bluestacks, mid ka mid ah kuwa ugu caansan….
Huawei FreeBuds 4, beddelka ugu wanaagsan ee madax -weynaha TWS ee furan [Falanqaynta]
by Miguel Hernandez samee Bilaha 2 .
TWS taleefoonnada gacanta ee bilaa -waayirka ah ayaa si isa soo taraysa ugu dhex milmay suuqa, si ay wax u adag tahay in la helo ...
Super EQ S1, falanqaynta, waxqabadka iyo qiimaha
by Rafa Rodríguez Ballesteros samee Bilaha 2 .
Waxaan ku soo laabannaa annagoo falanqayn ku sameyneyna dhegeysiga bluetooth -ka wireless. Laakiin markan waxaan kuu soo qaadanaynaa moodel leh qaab “ka badan…”.
Dib-u-eegista kaameeradda ee Huawei P50 Pro, dhammaadka sare ee shirkadda [Falanqaynta DxOMark]
by Haaruun Rivas samee Bilaha 2 .
Huawei P50 Pro hadda waa mobilada ugu horumarsan astaanta, isagoo sidoo kale ka mid ah kuwa ugu sarreeya ...
Vacos Cam IR, kamaradda ilaalada ee leh madaxbannaanida
Maanta waxaan mar kale kaala hadalnaa kamarad ilaalinaysa guriga ama meheradda. Beddel dhab ah oo lagu beddeli karo ...
Realme GT Master Edition, Naqshad Jabaaniis ah si dib loogu qiyaaso guusha [Falanqaynta]
Haddii aad si joogto ah noo raacdo, waxaad durba ogaan doontaa inaan dhowaan falanqaynay Realme GT, aalad ka socota shirkadda Aasiya oo doonaysay ...
Unboxing + Dib u eegis + Telefoonka Tamarta Pro 3 Bixinta (Bixinta Caalamiga ah)
Codsi nadiifin wanaagsan oo Android ah oo kaa yaabi doona
LeEco LETV S3, falanqeyn iyo ra'yi
Chuwi Hi10 Pro, falanqeyn iyo ra'yi